Kitra – “Ligue des champions d’Europe” : tsy afaka hilalao i Ozil, anio, fa marary | NewsMada
Kitra – “Ligue des champions d’Europe” : tsy afaka hilalao i Ozil, anio, fa marary
Hifantoka amin’ny lalao ampahavalon-dalana miverina eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions”, taranja baolina kitra ny sain’ny rehetra anio. Anisan’ny hiady ny tapakila amin’izany ny Arsenal sy Bayern de Munich.
Ho fantatra, anio alina, izay ekipa roa voalohany tafita ka hiatrika ny lalao ampahefa-dalana amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa «Ligue des champions 2017». Anisan’ny lalao iray ny fampiantranoan’ny Arsenal ny Bayern de Munich. Efa nandresy tamin’ny isa mavesatra, 5 no ho 1, ny Bayern, tapa-bolana lasa izay tany Munich.
Ankoatra io faharesen’ny Arsenal io, mbola manana olana ihany koa izy ireo satria tsy afaka hiakatra kianja hifanandrina amin’ireo mpiray tanindrazana aminy i Mesut Ozil. Ao anatin’ny tsy fahasalamana mantsy ny lehilahy ankehitriny ka tsy mbola tena miverina amin’ny heriny, raha ny fanambaran’i Arsène Wenger, mpanazatra ity klioba anglisy ity.
Na izany aza, heverin’ny rehetra fa mety tsy hanova zavatra firy ny tsy filalaovany satria ho sarotra amin’izy ireo ny handresy ny Bayern de Munich, amin’ny isa 4 no ho 0 na ao an-jaridainy aza ny hilalaovana.
Etsy an-kilany, tsy afaka hilalao ihany koa, ho an’ny Bayern de Munich, i Philippe Lahm, nahazo karatra mavo roa sy i Jerome Boateng, izay tsy mbola tena salama. Etsy ankilany, hiverina hiakatra kianja i Renato Sanches.
Real tsy misy Varane
Fihaonana iray kosa ny fifandonan’ny Real de Madrid sy ny Naples. Any Italia no hanatanterahana ny lalao. Efa manana tombonisa 3 no ho 1 ny Madrilènes, amin’ity. Na izany aza, tsy anisan’ireo hiatrika ity fikatrohana amin’i Naples ity i Raphael Varane, noho ny ratra nahazo azy, nandritra ny fihaonana tamin’ny Valence, ny alarobia lasa teo. Araka ny nambaran’ny mpitsabo azy, mety tsy afaka hiakatra kianja ny tovolahy mandritra ny roa herinandro eo.
Na izany na tsy izany, matoky tena tanteraka ny Espaniola fa ho tafavoaka ny Real de Madrid, amin’io lalao anio io.